Sahan: Uruurinta ama ku mashquulida ma Muhiimad badan baa? | Martech Zone
Isniin, April 1, 2013 Axad, Maarso 31, 2013 Jenn Lisak Golding
Suuqgeyaal ahaan, waxaan soosaarnaa waxyaabo usbuucle ah (ama xitaa maalinle) oo kusalaysan suuqyadeena bartilmaameedka, dhiirigalinta rajadayada inaan raadino oo aan aqrino waxyaabahayaga. Dhinac ka mid ah lacagta, waxaan rajeyneynaa inay ka qeybqaadan doonaan oo ay faallo ka bixin doonaan waxyaabahayaga si aan ugu bilowno wadahadal (ogolaansho ku saleysan) iyaga. Dhinaca kale, waxaan sidoo kale dooneynaa inay buuxiyaan foomamka bogga soo degitaanka si ay u helaan waraaqo cadcad ama daraasad kiis, si aan u soo aruurino xog dheeri ah oo ku saabsan cidda ay yihiin, shirkadda ay u shaqeeyaan, iyo noocyada macluumaadka ay xiiseynayaan inay helaan . Si kastaba ha noqotee, waxaan bilaabeynaa goob xiriir ah oo aan la leenahay rajadayada iyada oo la rajeynayo in la kobciyo xiriirkaas waqti ka dib si loogu beddelo beddelaad.
Ku mashquulinta iyo la hadalka rajada khadka tooska ah waxay noqon kartaa mid faa iido badan leh, waxayna bilaabi kartaa xiriir “dabiici ah”. Rajadu waxay dooran kartaa inay la shaqeyso ama aysan ku lug yeelan magacaaga, iyo in kasta oo aad si firfircoon u kobcinayso oo aad u siineyso waxyaabo, waxay u abuureysaa iyaga fursad ay ku gaaraan shuruudahooda. Kordhinta rajooyinkan way adkaan kartaa oo qaadan kartaa waqti dheer, laakiin waxay u oggolaaneysaa iyaga inay nagula xiriiraan qaabkooda waqtigooda.
Laakiin waxaan sidoo kale dooneynaa inaan awoodno inaan soo qabanno jihooyinka "jilicsan" si aan ula soconno dhaqdhaqaaqyada rajada markay booqdaan boggayaga ama aan si kale ula falgalno sumadeena. Tani waa sababta aan ugu abuureyno bogag degitaanno leh foomam si aan u soo qabanno macluumaad dheeri ah oo ku saabsan rajadayada isla markaana aan u bilowno inaan iyaga kula xiriirno ololeyaashayada kobcinta. Waxaan haynaa fikrad cad oo ku saabsan sida ay u daneynayaan, iyo sidoo kale waxyaabaha ay soo jiitaan.
Marka, tani waxay isweydiinaysaa su'aasha: kee baa ka muhiimsan, ururinta xogta ama kaqeybgalinta macaamiisha? Maxay kula tahay Dabcan, labaduba waa muhiim marka laga eego dhinaca suuq geynta, laakiin midkee ka mid ah waxqabadyadan ayaa ka caawinaya meheraddaadu inay gaarto beddelka?
Xulo mid ka mid ah xulashooyinka ku jira sahanka khadka tooska ah hoosta, ku shaqeeya kafaaladeena tiknoolajiyadda,Qalabaynta . Waxay u adeegaan ganacsiyada yaryar oo leh qaab dhismeedka khadka tooska ah, bogagga degitaanka, iyo ololeyaasha emaylka, oo dhammaantood ku jira Analytics iyo isdhexgalka bilaa cilmiga ah ee barnaamijyada jira sida Mailchimp, PayPal, Google docs, iyo inbadan.
Noo sheeg fikirkaaga waxaanan wax ka qori doonaa natiijooyinka 2 toddobaad gudahood! Xor ayaad u tahay inaad la wadaagto faallooyinkaaga hoosta.
Tags: ururinayaka qaybqaadashadafoomkaxirmo